SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Catalan Cebuano Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Fante Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hungarian Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Krio Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Maya Mingrelian Nahuatl (Huasteca) Ngabere Norwegian Oromo Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tahitian Tajiki Tankarana Tarascan Telugu Tigrinya Tojolabal Tongan Totonac Turkish Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Valencian Vezo Welsh Xhosa Zapotec (Isthmus) Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Kushambadzira JW.ORG paBook Fair Yakaitwa kuToronto
Kubva musi wa13 November kusvika musi wa16 2014, kwakaitwa Toronto International Book Fair uye yakaitirwa paMetro Toronto Convention Centre. Paishambadzirwa mabhuku akaprindwa uye ekuti unogona kuverengera patablet. Pamazuva mana ayakaitwa, vanhu vanopfuura 20 000 vakauya kuzoona mabhuku aishambadzwa.
Zvapupu zvaJehovha zvaivawo nenzvimbo yainyatsooneka munhu ari kure uye yaiva yakanyatsogadzirwa zvakanaka. Vanhu vairatidzwawo kuti jw.org inoshandiswa sei.
Mumwe maneja wepaBook Fair iyi akati: “Website yenyu ndeyechimanje manje. Ndinofunga kuti vamwe vari kushambadzira vanofanira kutevedzera zvamuri kuita.” Vanhu vaishanya panzvimbo yeZvapupu yekushambadzira vakati website iyi ndeyemhando yepamusoro, iri nyore kushandisa, uye inopindura mibvunzo yakakosha muupenyu. Vakabayiwa mwoyo pavakaona kuti ine mazano anobatsira vanhu kuziva zvavangaita pavanosangana nematambudziko muupenyu.
Vanhu vakawanda vaiuya vairatidza kuti vakanga vasati vambonzwa nezvejw.org. Vazhinji vakashanyira nzvimbo iyi vakatora turakiti rinonzi Ndekupi Kwatingawana Mhinduro Dzemibvunzo Mikuru Yeupenyu? kana kuti kadhi rine mashoko ekuti vangawana sei Zvapupu. Vakawanda vakati vaizoenda pawebsite iyi zvakare, uye vamwe vakakumbira kuti vashanyirwe neZvapupu zvaJehovha kumba kwavo.
Musi weChishanu wanga uri wekushambadza mabhuku evana, saka Zvapupu zvairatidza vanhu makatuni epajw.org. Vana vechikoro vakawanda vaiuya nevadzidzisi vavo, vomira vachiona.
Mumwe murume wekuChicago anoshandira kambani inogadzira maBhaibheri akaona Shanduro yeNyika Itsva yeMagwaro Matsvene uye akafarira chaizvo magadzirirwo ayakaitwa. Murume uyu aida kuzotaura nevanhu vakaprinda Bhaibheri iri, saka akapiwa kadhi rine mashoko ekuti angavawana kupi.
Website iyi ine mitauro inopfura 700 uye vanhu vaisarudza mitauro yavanoda. Mitauro 16 inotevera ndiyo yakasarudzwa inoti: chiAmharic, chiBengali, chiChinese, Chirungu, chiFrench, chiGiriki, chiGujarati, chiHindi, chiKorean, chiPortuguese, chiSpanish, chiSwedish, chiTamil, chiTigrinya, chiUrdu, uye chiVietnamese.
Chimwe Chapupu chaigamuchira vanhu vaishanya panzvimbo yekushambadzira yeZvapupu chakaona kuti kuudza vanhu nezvejw.org, kwakasiyana chaizvo nekuvaratidza kuti inoshanda sei. Chapupu chacho chakati, “Takawana mukana wakanaka chaizvo wekuratidza vanhu website iyi.”
Unogona kudzidza zvakawanda nezvedu uye zvatinotenda uyewo unogona kuwana mhinduro dzemibvunzo yako yeBhaibheri.
Dzidza kuchinja kwaungaita peji yepaIndaneti kuenda kumutauro waunoda uye kuvhura nyaya kana kuti kutsvaka bhuku mune mumwe mutauro.